Ihie 16 nke na-eme ka anyị bụrụ okenye ma budata ọdịdị ahụ
Ị ghọtaghị ihe mere ndị ọzọ ji eche na ị dị nká karịa afọ gị? N'ezie, naanị ị na-etinye ihe eji eteme ihe n'ụzọ ziri ezi, họrọ uwe ma mee ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ma nke a dị mfe idozi.
Ndị inyom na-achọkarị ka ha dị obere, ma, n'amaghị onwe ha, ha mehiere mgbe ha na-etinye ihe etemeete, ị na-ahọrọ uwe na ihe oyiyi ndị ọzọ, ya mere, ha dị nnọọ nká karịa afọ ha. O di nkpa ighota nsogbu ndia ka i wee ghara ime ka ha karia.
1. Nnukwu nku anya - enweghị
Ịmepụta ihe oyiyi zuru ezu na-enweghị ọrụ nku anya apụghị ime, ma ọ bụrụ na ị na-ehicha ya dịka ọcha, ọ ga-abụ ọ bụghị nanị na ọ dị ịtụnanya, ma gbakwunye afọ. Mkpebi ziri ezi - họrọ ndò nke dị ntakịrị ọkụ karịa agba anya gị.
2. Ọhụụ na-enweghị atụ - ọ dịghị
Ihe ọzọ na-adabaghị n'ịdị na-ese onyinyo gị bụ ihe na-adịghị mma nke ihe. N'ihi ya, ahụ na-ele anya na-enweghị atụ. Ọ bụrụ na ị zụtara ihe a ma ama n'oge ahụ, ọfụma ma ọ bụ skirts dị elu, ọ kachasị mma ijikọta ha na uwe elu na-enweghị aka na n'elu, nke na-emeghe afọ. Ịnwere ike ịgbakwunye oyiyi ahụ na obere akpa akwa. Ọchịchị na-arụ ọrụ ma dịka ihe atụ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na elu dị oke nká, mgbe ahụ, ala kwesịrị ịgbachi.
3. Na-ekpuchi nkuchianya ala - ee
Were anya gị na eyeliner ma na elu ma na ala, ị ga-eme ka ọ dị warara, a ga-ekpochapụ ihe niile. Ndụmọdụ ziri ezi sitere n'aka ndị na-ese ihe nkiri - iji mee ka anya dịkwuo, mechie eyelid ala na pensụl.
4. Anya nkucha - enweghị
Ọtụtụ mgbe enwere anya na nku anya na-adaba na ọdịda. "Ụdọ" "nkuzi" dị ogologo n'oge gara aga ma ugbu a bụ nku anya nku, nke na-eme ka ọ dị ka nwata. Jiri onyinyo na pensụl nweta ọdịdị mara mma. Ihe ọzọ sitere na cosmetologists: adịghị etinye ude na nso nku anya, ka ha na-emechi pores ma gbochie ntutu isi na-etolite.
5. Mascara na nku anya ala - enweghị
Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị ịdọta mmasị ndị ọzọ na wrinkles gị na anya gị, mgbe ahụ kwusi na-esere anya ala gị, ka ink na-agbanyekwu ọkụ. Mkpebi ziri ezi - ma ọ bụ hapụ ha ka ọ ghara ịdị, ma ọ bụ ihe na-enweghị ntụpọ na-emetụ aka na nkuku anya.
6. Nchacha nke akpụkpọ anụ - ọ dịghị
Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eme mmehie dị oke njọ - na-emekarị nchacha, ịkwachasị na usoro ndị ọzọ, nke na-emecha mee ka eziokwu ahụ doo anya na akpụkpọ ahụ na-adị oke ọkụ ma dị mkpa. Ndị ọkà mmụta ọgwụ na-ekwenye na nchacha dị oke ọkụ na-agbagha usoro usoro mgbochi wrinkles. Ihe ngwọta ziri ezi bụ ndị na-ehichacha ya na obere ngwongwo ndị na-ekwesịghị ịdị na-eme ihe ike ma nwee ike ịnweta abụba bara uru.
7. Onyunyo gbara ọchịchịrị na nkuchi dum - ee
Ihe ndi ozo n'adighi nwoke ma obu nwayi nwoke na nwanyi nwere ike ime ya - iji kpochapu elu onu. N'ihi ya, ihu na-ele anya n'ihu. Iji zere njehie a ma mee ka anya hụkwuo okwu, tinye ụda gbara ọchịchịrị naanị na nkuku anya.
8. Uwe na-adịghị adị - ee e
N'oge na-adịbeghị anya, na ọnụ ọgụgụ kachasị ewu ewu bụ akwa uwe, ma a ghaghị iburu ya n'uche na ọ na-aga n'ebe mmadụ niile nọ, n'ihi ya, ọ bara uru iburu ya nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ikpokọta uwe dị mma na akwa jaket. Cheta na ọ ka mma ilekwasị anya na ejiji, kama na njirimara nke ọgụgụ na afọ.
9. Nmecha na-enweghị onye na-agụgharị - ee e
Ọtụtụ ndị inyom na-ata ahụhụ site na ọchịchịrị gbara n'okpuru anya, nke dị njọ mgbe ị na-ehighị ụra. Na-agba mbọ iji esemokwu kwụ ha, ị nwere ike mesie enweghị ike. Ihe ngwọta ziri ezi bụ itinye onye na-agbazi ya, ọ ga-adị ha mkpa ịdọrọ triangle n'okpuru anya, bụ nke a ga-agbakwunye mkpịsị ahụ. Ihe nkedo nke onye na-emezi ihe kwesiri ibu ihe di mkpa. Mgbe nke ahụ gasịrị, ụda ahụ na-etinye aka na ihu.
10. Blush too obere - ọ dịghị
Dị ka iwu ndị ahụ si dị, a ghaghị itinye rouge na akụkụ kachasị mma nke cheekbones. N'otu oge ahụ, mgbe ọ dị afọ, ọ nwere ike ịmalite, n'ihi ya, njakịrị agaghị abụ ihe ịchọ mma, kama nke ahụ, mesie afọ na ọghọm. Maka ụmụ nwanyị tozuru okè, ndị na-ese ihe nkiri na-akwado itinye aka na njedebe nke cheekbones, nke ga-eme ka ihu ahụ sie ike.
11. Nnukwu ụdị - ọ dịghị
Ndị inyom na-etolite na-amalite ịhapụ ihe ndị na-ewu ewu, ịhọrọ usoro siri ike na agba omenala. Nke a bụ nnukwu ndudue nke na-agbakwụnye afọ. Egbula ịkwadebe ejiji na ihe ndị na-eto eto, dịka ọmụmaatụ, akpa akpa, akwa akpa na ngwa. Nchịkọta nke stylists: ọtụtụ ọdụ ojii na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ dị mma maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ nwanyị niile.
12. Ngwa maka otu agba - enweghị
Ruo ogologo oge, a kụziiri anyị na agba nke akpụkpọ ụkwụ, akpa, eriri na ngwa ndị ọzọ kwesịrị ịdị otu agba, mana iwu a adịbeghị anya. Ndị na-emepụta ihe na-emesi obi ike na ndị mmadụ na-atụbe ngwa ngwa n'otu ụdị, dịka okenye karịa afọ ha. Ọ ka mma maka onyinyo ahụ ịhọrọ naanị otu nkowa dị mma ma ọ bụ jiri nchikota dị iche iche nke agba agba.
13. Ọtụtụ ntọala - ọ dịghị
Iji zoo ezughị okè na ihu ma nweta akpụkpọ anụ, ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-etinye nkwụsị ntọala siri ike, ma nke a na-eme ka mmetụ dịkwuo njọ. Ihe ọzọ na-emekarị bụ agba agba nke ude, nke na-emekwa ka ihu ele anya. Ọ ka mma ịzụta ìhè na mmiri mmiri na ihe na-egbuke egbuke nke ga-eme ka anụ ahụ dịkwuo mma na ihe ndị ọzọ.
14. Nnukwu ntụpọ nke ntụ ntụ - ee
Ebe ikpeazu maka ịkwa ụda ụda bụ ngwa nke ntụ ntụ, nke na-ekwesịghị ịbụ nke ukwuu, ma ọ ga-eme ka etemeete ghara ịda. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe nkedo ọkụ ma ọ bụ osikapa egbuke egbuke, mara na ọ bụ naanị iji wepu ocha greasy na T-mpaghara. Ndị na-emepụta ihe nkiri anaghị akwado ntụpọ nke anya, n'ihi na nke a ga-eme ka nkwonkwo ndị ọzọ kpọọ, akpụkpọ ahụ ga-elekwa akọrọ iji nye afọ.
15. Enweghị ụra - ee e
Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ata ụra n'ihi ụra n'ihi ihe dịgasị iche iche, nke a na-eme ka nrụgide na nrụgide na-emetụta ọdịdị ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ na-ehi ụra ntakịrị, mgbe ahụ ahụ ga-etowanye ngwa ngwa. Tụkwasị na nke a, ndị ọkà mmụta sayensị egosila na n'oge ụra miri emi n'anụ ahụ na-emepụta hormone na-eto eto, nke dị mkpa maka mweghachi na mmelite nke mkpụrụ ndụ mebiri emebi. Cheta na ụra nke ọma ga-adịru elekere asatọ.
16. Mmasị maka mmanya na-aba n'anya - ọ dịghị
Àgwà ọjọọ na-emetụta ọdịdị ahụ, na ịṅụ mmanya na-aba n'anya, mgbe ahụ ọ nwere nsogbu abụọ dị oke mkpa maka ndị chọrọ ịma mma ma na-eto eto. Nke mbụ, ọ na-ebute mmiri ahụ, nke bụ ihe ndabere nke ọdịdị ọhụrụ. N'ihi ya, ntakịrị wrinkles na-amalite ịpụta na akpa n'okpuru anya. Nke abuo, mmanya na-ebelata ego vitamin A n'ime ahụ, ọ dịkwa mkpa maka mmeghari ụlọ. Ọ bụrụ na ị kpebie ịsara ahụ ma ṅụọ mmanya ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọzọ, mezie ọnụ mmiri ị na-aṅụ.
Akpụkpọ ụkwụ-antitrend: ụdị nke akpụkpọ ụkwụ 10, bụ nke na-adịchaghị mma!
Decollete kama hijab: na magazin nwetara Iran ejiji magazin tupu mgbanwe!
Ụjọ! Ebe ebe sọks kwụsịrị mgbe ịsa, dị adị n'ezie!
Ònye na-ebu Adidas: 35 njakịrị na ike na-hụrụ na Russia!
9 ọla na nwanyị ọ bụla kwesịrị inwe
Ọ bụrụ na mmadụ na-ese foto dị ka ụmụ nwanyị: 30 otpad gbaa!
15 Atụmatụ maka ịghọ ihe ngosi Antistyle
Ndị isi 10 kachasị mma nke ụwa
30 uwe akwa kacha mma na ndị isi nwa Disney
Leopard iwe ọkụ, ma ọ bụ 35 mods ndị na-enwe mmasị na mbipụta ọhịa!
15 Ihe ngosi nke Evolution of Kim Kardashian Style
Onye na-egbu oge nke ime afọ site n'izu
Otu album ọhụrụ nke Janet Jackson Unbreakable mere onye na-ejide ya
Achịcha ndị na-eri anụ - 7 ntụziaka mbụ nke ụlọ nri gị kachasị amasị gị
Ụlọ obere ụmụaka
Oscar-2016: gosi usoro ihe omume na mmeri
Manty na Uzbek ịke - kacha mma ntụziaka nke mgwakota agwa na dị iche iche fillings
Onyinye maka nwanyị dị afọ 55
Kedu ka esi kpochapụ anwụnta?
Ihe ngosi agbamakwụkwọ maka nwanyị a na-alụ ọhụrụ
Ejiji ụmụ nwanyị - Fall 2016
Ejiri aka ha na-akpa aka
Salad na basil
Ego ole ka carbs nọ na persimmon?
Kristen Stewart na-egosipụtakwa ọnyá na ikpere ya
Kedu ka ngwa ngwa ga-efu mgbe a mụsịrị nwa?
Ndụ mgbe ọnwụ - eluigwe na hell
Ejiri ọkụ eletrik